I-CooL HouSe iyindlu yasogwini esezingeni eliphezulu etholakala endaweni eseceleni kakhulu ye-Jolly Harbour. Lokhu kuvumela izivakashi ukuthi zijabulele ubumfihlo obuphezulu kakhulu, zitholakala ogwini lolwandle olukhethekile endaweni, nokho zithokozela zonke izinzuzo zomphakathi onesango kanye ne-marina.
Lesi siqhingi esihle sokuhlehla sithwebula ingqikithi yokuphila kwe-Caribbean ngesitayela sesimanje esikhululekile. Ukunaka ngokucophelela imininingwane kungazwakala kuzo zonke izici zobuhle obungaphansi kwe-CooL HouSe kanye nokuqedwa kwekhwalithi ephezulu - elinye lamagugu angempela e-Western Cape enhle yase-Antigua.
Ifakwe phakathi ekujuleni kwesango lokuvikeleka kwe-Jolly Harbour, ekugcineni kolwandle olucezile lwaseNyakatho Finger, kude nethrafikhi yezimoto nabahamba ngezinyawo, i-CooL HouSe iyindawo ekahle yokubalekela esiqhingini. Jabulela ukukhululeka, ukuphepha kanye nemfihlo ngaphandle kokuzithola uphakathi nendawo nakuba ukuthula kwendlu ngezinye izikhathi kungenza kubonakale kunjalo.
Izakhiwo ezintathu eziyinhloko zihlobise indawo, exhunywe izindlela zokuhamba zengadi ezigcwele uhlaza lwasezindaweni ezishisayo, umthombo ocwebezelayo opholile nezindawo eziphumulele zokuzipholela ethunzini. I-Caribbean "ukuphila ngaphandle" akuwona umushwana, kodwa i-axiom emaphakathi echaza yonke idizayini yayo yonke indawo ku-CooL HouSe.
Inhliziyo ye-CooL HouSe iyindawo yokudlela embozwe ngaphandle, indawo yokuhlala, ikhofi, ibha kanye nendawo yebhilidi ebheke ukuthula okuluhlaza koLwandle lweCaribbean. Ukubuka okungamamitha angu-40 okungavimbekile kubheke ichibi futhi ngokuzikhandla kuguqule kube indawo engenamiyane enezikrini ezizenzakalelayo ezivikela yonke indawo yokuhlala. Jabulela ukuba ngaphandle ubusuku bonke ngaphandle kokuphazanyiswa yizimbungulu. Ukuzipholele kumasofa ngokubuka ulwandle, ukudlala umdlalo wamabhiliyadi, ukudla etafuleni likanokusho lezihlalo eziyi-14, noma ukujabulela i-cocktail endaweni yokucima ukoma, konke lokhu ujabulela ukushona kwelanga entshonalanga futhi ukububula kolwandle.
Ikhishi kanye nezindawo zokuhlala eziyinhloko zibamba imimoya yokuhweba futhi zivumele umoya ukuthi ugeleze ngqo endaweni eyinkimbinkimbi, kuyilapho ungaphakathi kwendlu. Ikhishi laseJalimane elenziwe ngokwezifiso elikhethekile nelifakiwe lifika ligcwele noma yimaphi amagiya okupheka ochwepheshe adingekayo. Izinto zikagesi zihlanganisa isiqandisi sewayini, isiqandisi esihlukene sikabhiya neziphuzo, isiqandisi esikhulu se-Miele, izinga lochwepheshe ngaphansi kwe-counter maker, indawo yokupheka enkulu yegesi, nazo zonke izinto ezincane ezidingekayo. Ikhawunta yasekuseni kanye nosofa omkhulu kuhlanganiswe ngaphakathi ekhishini ukuze kube lula futhi kube lula ngenkathi kulungiselelwa futhi kuthokozelwa indawo, kanye nebha yokugoqa exhuma ngqo endaweni yekhawunta yekhishi elikhulu.
Okunamathiselwe ekhishini indawo yegumbi lokuphumula lesibili enomabonakude omkhulu wamayintshi angu-70 nohlelo lomsindo kanye nezihlalo eziningi ezinethezekile ukuze uthole ulwazi lwethelevishini olugxilile. Indawo ingahlukaniswa ngezicabha zengilazi ezinde zobumfihlo kanye nokubuka okunomoya opholile uma uthanda. 6 Izikhulumi ze-Sonos zitholakala kuso sonke isakhiwo esikhulu esinezindlela eziningana zokulalela ezihlukahlukene.
I-master suite ixhunywe endaweni eyinhloko yokuhlala yangaphandle ngephasishi eseceleni, futhi inombono ovulekile wolwandle, nendawo yayo yokuhlala yangasese / ibhaluni. Idizayini eheleza umoya ohelezayo ixhuma igumbi lokugezela eline-suite negceke elingaphakathi elimnandi le-CooL HouSe. Igumbi lokugezela elibanzi lihlanganisa ishawa enkulu, itafula letshe elinosinki abangama-Italian abangamawele, ubhavu omnandi wokucwiliswa emisindo yesici samanzi eduze nomoya opholile wokuhweba wasebusika ebusuku.
Izakhiwo ezimbili ezengeziwe indlu ngayinye inepheya lamagumbi okulala amiswe ngokugcwele anamagumbi okugeza ayi-en suite, imibhede yobukhulu benkosi kanye nenqwaba yamathuba okuqinisekisa ukunethezeka kwezivakashi ezinhlelweni eziningi ezahlukene. Wonke amagumbi okulala afaka okomoya kanye nezindawo zokuhlala ezingaphandle ezizimele ezineminyango ngayinye. Elinye lamakamelo okulala linekhishi elinesitofu esincane nesiqandisi ukuze kube lula. Leli gumbi elifanayo lokulala lixhumana ngezicabha zangaphakathi nelinye igumbi lokulala elimiswe elinemibhede emikhulu emibili: 1 single over single, and 1 single over double. Lokhu kuvumela umthamo ophelele kakhulu wokulala wengane, noma indawo ethokomele yombhangqwana omdala futhi.
Sicela uqaphele ukuthi leli gumbi lokulala lesi-5 lanele kuphela abantu abadala abangu-2, okuletha ukuhlala okuphezulu okuphumelelayo kwendlu kubantu abadala abayi-10 kanye nabangu-13 sebebonke kuhlanganisa nezingane.
Idizayini evulekile ye-CooL HouSe, enezikhala ngazinye ezinqunyelwe ukwakheka kwezwe nezici zisho ukuthi kunophahla olwanele lawo wonke umuntu. Okuhlangenwe nakho okuphilayo lapho kunesikhala esanele ngempela sokuthi izivakashi zibe zodwa, endaweni eyodwa yenqwaba yezindawo kuyo yonke inhlanganisela, noma zibe ndawonye lapho zifunwa ezindaweni okwabelwana ngazo. Imibhede yosuku egcekeni nendawo enkulu yokuhlala edidiyelwe yokusnuza ngamanzi aphuphumayo, igceke elisophahleni ukuze ujabulele i-cocktail yosuku lokuvilapha, izihlalo zegumbi lokuphumula elinethezekile endaweni yokubhukuda kanye nezindawo zokuphumula ezingaphakathi kwe-pool ezingu-2, izihlalo zasolwandle eduze kolwandle, lapho. ngokuqinisekile kuyinto yawo wonke umuntu.
Ichibi liqukethe i-chlorinator yamanzi anosawoti elula kakhulu esikhumbeni nasemehlweni. Kukhona indawo yokubhukuda engajulile elungele izingane ezisacathula noma yokujabulela izindawo zokuhlala ezihlanganisiwe zamachibi elangeni. Ivulandi ifaka izambulela ezingu-2 ezichwepheshile ze-Tucci zalabo abafisa umthunzi omncane elangeni elishisayo lase-Caribbean.
Kunegumbi elikhulu elihlukile elihlukile elinomshini wokuwasha osezingeni eliphezulu kakhulu nokomisa ukuze noma yimuphi umsebenzi owenziwa izisebenzi zokuhlanza ungaphazamisi izivakashi ngesikhathi sokuhlala kwazo.
Ngaphezu kokuzipholela endlini, iJolly Harbour iyikhaya lesitolo esikhulu esigcwele kahle, igalofu nethenisi, izindawo zokudlela, amabha, i-charter sailing kanye nokudoba ukubala okumbalwa. Singahlela kalula ezinye izinkonzo eziningi, ukubuka indawo noma imisebenzi yokuzijabulisa etholakala noma ukusuka esiqhingini uma siyicela. Izicelo ezinjalo zingabandakanya:
-Izinsiza zansuku zonke
-Umpheki womuntu siqu
-Ukuqashwa kwenqola yegalofu ye-Car/Jeep
-Izincomo zokudla kanye nokubhuka
-Massage & Yoga izikhathi
-I-Private Jet Skis
- Izifundo zokuhamba ngomkhumbi
-Snorkel & Scuba uhambo
-Catamaran Cruise ezungeze i-Antigua
-I-Private Sailing charter
-Ukugibela Ihhashi Ogwini
Sazise ukuthi yini onayo engqondweni futhi singasiza ukwenza leyo mibono iphile!
I-Jolly Harbour umphakathi onamasango otholakala ohlangothini olusentshonalanga ye-Antigua. Le ndawo ibusiswe ngamanye amabhishi amahle esiqhingini, kuqala ngobhishi olukhethekile lwaseNorth Finger olutholakala phansi kwechibi. Amanye amabhishi athandwayo yidrayivu emfushane ogwini. Ngaphakathi komphakathi kunezindawo zokucima ukoma eziningi, izindawo zokudlela, i-marina ephithizelayo, izitolo negrosa, izinkantolo zethenisi inkundla yegalofu eyimigodi engu-18 kanye neklabhu yokuzivocavoca.
Uzokwamukelwa kule ndawo ngumphathi wethu wendlu ojabulisayo, uRhea. Uzokusiza nganoma yimiphi imibuzo noma izicelo ezengeziwe ongazifisa.